[OFISIALY] dr.fone Toolkit - iPhone Data Recovery 
Izao tontolo izao ny 1 iPhone angona fanarenana rindrambaiko.
IPhone avo indrindra ny tahan'ny fanarenana antontan-kevitra ao amin'ny orinasa.
Sitrana angona avy iPhone, iTunes sy iCloud.
Sitrana sary, lahatsary, fifandraisana, hafatra, fanamarihana, antso hazo, sy ny maro hafa.
Mifanaraka amin'ny farany iPhone 7 Plus, iPhone 7.
Very antontan-kevitra dia tsy very. Afaka sitrana antontan-taratasy avy amin'ny tranga iombonana maro.
Very antontan-kevitra taorian'ny orinasa Reset
Very antontan-kevitra noho ny iOS Vaovao farany
Fitaovana niraikitra fa tsy mamaly
Data tsy ampy aorian'ny jailbreak na ROM mifandrambondrambona
Device voahidy na hadino tenimiafina
Tsy afaka synchronize nomaniny ho solon'izay
Jereo & Preview voafafa Data for Free
Azonao ampiasaina ity angona iOS fanarenana ny banjino very rehetra voafafa na tahirin-kevitra eo amin'ny iPhone, iPad na iPod mikasika, ka hanopy maso maimaim-poana ny antsipirihany.
Download sy View iCloud Backup Content for Free
Te-télécharger sy hanesorana ny iCloud nomaniny ho solon'izay rakitra? Ity tahirin-kevitra iOS fanarenana rindrambaiko mamela anao hanao izany maimaim-poana. Andramo izany ka dia ho fantatrareo izany.
Vakio ny iTunes Backup File for Free
Isika rehetra dia mahafantatra fa tsy hamela Apple ny olona hamaky ny votoatin'ny nomaniny ho solon'izay ny iTunes rakitra, raha mbola io tahirin-kevitra iOS rindrambaiko no sitrana, ary maimaim-poana izany.
1 Tsindrio ny Preview & Print ny Data
Fa mihoatra noho ny iOS fitaovana angona sitrana. Rehefa mahita ny rakitra ao amin'ny Notarafina vokany, dia afaka hanopy maso mivantana sy pirinty ny votoaty toy izany rehefa misy mila fanampiana. Tena iray-tsindry asa.
Sitrana Up ny 18 File Types
Ity tahirin-kevitra iOS fanarenana rindrambaiko dia manome fahafahana anao sitrana angon-drakitra toy ny fifandraisana, hafatra, sary, fanamarihana, miantso ny tantara, fampahatsiahivana, WhatsApp hafatra, sy ny maro hafa, hatramin'ny 18 rakitra karazana.
Fantenana sitrana izay tianao
Rehefa avy mitily ny iPhone, iPad na iPod mikasika, na hakana iTunes na iCloud nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy, dia afaka maneho sy misafidy izay zavatra tianao ho sitrana azy ireo ao amin'ny solosaina, na amin'ny fitaovana. Tena tanteraka miakatra ho any aminareo.
Miaraha miasa indrindra amin'ny iPhone, iPad sy iPod mikasika
Na inona na ianao mampiasa ny farany iPhone 7, iPad Pro, na ny taloha 4 iPhone, iPad 1, io antontan-kevitra iOS fanarenana tanteraka rehetra mifanaraka amin'ny ohatra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Ity tahirin-kevitra iOS fanarenana rindrambaiko dia tanteraka ihany mamaky-rindrankajy. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Complete iOS fifampifanarahana mifamadika
Rehetra modely ny iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, ary iPad
Supported karazana rakitra
Safari ny tsoratadidy
App ny sary
App ny lahatsary
App ny antontan-taratasy
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac OS X 10.12 (macOS Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, na 10.6
3 Data Recovery Fomba
Mivantana banjino ny finday ho sitrana voafafa antontan-kevitra
Hanesorana ny iTunes nomaniny ho solon'izay, ary sitrana voafantina antontan-taratasy
Hanesorana ny iCloud nomaniny ho solon'izay, ary sitrana voafantina antontan-taratasy
Ny avo indrindra ny tahan'ny fanarenana ao amin'ny orinasa.
dr.fone ny Guarantee
Intuitive, azo antoka, ary azo itokisana.
Andramo izany maimaim-poana nandritra ny 30 andro!
Andramo izany Free nandritra ny 30 andro!
Hamarino antontan-kevitra amin'ny an-tsipiriany alohan'ny sitrana
Sitrana ny angon-drakitra, na mifidiana rakitra
Misy antontan-kevitra dia tsy ho overwritten
Ihany ianareo vao afaka mampiasa ny kaonty
Aina Momba ny Tsiambaratelo
3 dingana tsotra: hifandray, banjino aretina ka hahasitrana
30 andro fitsarana maimaim-poana
Voafafa sary rehetra hita. Naka olona tokony ho 30 minitra. Ny fametrahana fandaharana dia tsy maka fotoana be. Raha fantatrao anglisy, dia ny zavatra rehetra mandeha haingana be. Dia hampiasa ny fandaharana ao amin'ny toe-javatra ny vonjy taitra. Manantena mahomby fampahiratana amin'ny zava-dehibe ho ahy ny sary.
Misaotra anao noho ny fanampiana. Manampy ahy mba voafafa indray ny sary. Io no fandaharana tsara. I torohevitra ny olona rehetra hampiasa izany fandaharana raha mamafa ilaina vaovao
Good fandaharana. Manampy ny olona ho sitrana voafafa raki-daza. Noho ny mpamorona. I manoro mampiasa be dia be ny olona izay tena mila hamerina fampiharana. Aza matahotra ny fametrahana fandaharana io. Satria dia hanampy anao ho voafafa indray ny soso-kevitrao
3 Fomba sitrana Fafao Text Messages amin'ny iPhone
Ahoana no sitrana Data avy voapetraka Broken iPhone
Ahoana no sitrana Call History amin'ny iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Anisan'izany)
Ahoana no sitrana voafafa sary avy amin'ny iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Anisan'izany)
Ahoana no sitrana iPhone Data Very taorian'ny Famerenana ny Factory Settings
Ahoana no sitrana voafafa Video amin'ny iPhone 7 (Plus) / 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
Ahoana no Retrieve WhatsApp Messages amin'ny iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Ahoana no sitrana voafafa iPhone Contacts tsy Backup
Ahoana no sitrana iMessages avy amin'ny iPhone (iPhone 7 Plus / 7 Anisan'izany)
Fix amin'ny rafitra isan-karazany iOS olana toy ny famerenana fomba, Apple Logo fotsy, mainty lamba, looping tamin'ny fiandohan'ny, sns
Nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny izay zavatra ao amin'ny / ny fitaovana, sy ny fanondranana izay tianao amin'ny nomaniny ho solon'izay ao amin'ny solosaina.
Hamindra iOS WhatsApp ny iPhone / iPad / iPod mikasika / Android fitaovana, na nomaniny ho solon'izay / fanononana tsy izany ny solosaina.